people Nepal » सरकारको आलोचकलाई मन्त्री ज्ञवालीले दिए सिनो खाने गिद्ध र गल्लीमा हिंड्ने कुकुरको बिम्ब सरकारको आलोचकलाई मन्त्री ज्ञवालीले दिए सिनो खाने गिद्ध र गल्लीमा हिंड्ने कुकुरको बिम्ब – people Nepal
सरकारको आलोचकलाई मन्त्री ज्ञवालीले दिए सिनो खाने गिद्ध र गल्लीमा हिंड्ने कुकुरको बिम्ब
Posted on March 30, 2020 by Durga Panta
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारको आलोचना गर्नेहरुलाई गिद्धको बिम्ब प्रयोग गरेर आलोचना गरेका छन् ।
सोमबार रासससँग विशेष अन्तर्वार्ता दिँदै उनले महामारीको बेला पनि कसैलाई स्वार्थको रोटी सेकाउनुपर्दोरहेछ भन्दै टिप्पणी गरे । ‘यस्तो प्रवृत्तिबाट आजित भएर मैले केही दिन अघि प्रतीकात्मक रूपमा भनेको थिएँ, गिद्धहरु गीत गाउँदैनन्, उनीहरू फूलतिर हेर्देनन्, सिनो मात्रै हेर्छन् । मेरो भनाई त्यही तप्काप्रति लक्ष्यित थियोे,’ उनले भने ।
मन्त्री ज्ञवालीले स्वास्थ्य क्षेत्रको निजीकरण कसले गरेको भन्ने प्रतिप्रश्न गर्दै विन्स्टल चर्चिलको भनाई उद्धृत गर्दै आलोचकहरुलाई कुकुरको बिम्ब पनि प्रयोग गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘विन्स्टन चर्चिल भन्थे– गल्लीमा भुक्ने कुकुरतिर फर्केर ढुंगा हान्न थालियो भने कहिल्यै गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । त्यसकारण हामी आफ्नो गन्तव्यमा अगाडि बढिरहेका छौँ ।’
चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नेक्रममा व्यापाक भ्रष्टाचार भएको भन्दै केही राष्ट्रिय मिडियाहरुले समाचार प्रकाशन गरेपछि यसको जवाफ दिनेक्रममा मन्त्री ज्ञवालीले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।
यस्तो छ ज्ञवालीको अन्तर्वार्ताको अंश-
पहिलो त यस संकटको बेलामा आम नागरिक र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले सरकारमाथि विश्वास गर्नुभएको छ । सरकारले महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म र स्रोतसाधनले भ्याएसम्म हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । सर्वाधिक शक्तिशाली मुलुकहरूलाई पनि हल्लाउने यस संकटको घडीमा विश्वका सबै मुलुकमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव देखिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले समेत जनरल मोटर्स (जिएम) र फोर्ड कम्पनीलाई अब कार होइन भेन्टिलेसन उत्पादन गर भनिरहेको मैले सञ्चारमाध्यममा हेर्दै थिएँ । ड्यामलोरको सिइओले पनि उत्पादनको ढाँचा बदल्नुपर्छ भनिरहेका छन् । मैले सञ्चारमाध्यम हेर्दै थिएँ, भारतमै संकट बढ्दै गएमा त्यहाँ सात लाख पिपिइ चाहिन्छ भनेर स्वास्थ्यकर्मीले भनेका थिए । त्यसकारण यसको सामना गर्न विश्व व्यवस्था विल्कुलै तयार थिएन । अर्काे कुरा, बिहान दिउँसो काम गरेर बेलुका छाक टार्नुपर्ने नागरिकले पनि यो लकडाउनलाई समर्थन गर्नुभएको छ । सरकारलाई नागरिकले विश्वास गरेको यो बलियो प्रमाण हो ।
हामी प्राप्त उपकरण र सामग्री समुचित ढङ्गले प्रदेशस्तरमा वितरण गर्छाै । हामीले अग्रमोर्चामा काम गर्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षामा ध्यान दिएका छौँ । अब हामी परीक्षणको दायरालाई व्यापक बनाउँछौँ । म यो भन्दिन कि कुनै कमीकमजोरी छैन । तर हिजो कसले हाम्रा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सेवा क्षेत्रको निजीकरण गर्‍यो ? वीर अस्पतालका लागि भनेर करोडौँ रुपियाँ तिरेर ल्याइएका उपकरण कसरी तीन महिनामै बिग्रन गए र कसले किन थन्कायो ? अहिले, यतिबेला, यो हेर्ने र समीक्षा गर्ने बेला होइन । विन्स्टन चर्चिल भन्थे– गल्लीमा भुक्ने कुकुरतिर फर्केर ढुंगा हान्न थालियो भने कहिल्यै गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । त्यसकारण हामी आफ्नो गन्तव्यमा अगाडि बढिरहेका छौँ ।